MyTourBook: Ntughari ohuru nke 21.6.1 nke Onye Nlekọta Ọzụzụ Egwuregwu | Site na Linux
Anyị na-eziga mgbe niile free, oghe ma ọ bụ free ngwas, maka iji ya rụọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ, ma ọ bụ maka oge ntụrụndụ na ntụrụndụ ma ọ bụ mpaghara ahụ ike. Ndị nke eji egwuregwu ha anaghị adịkarị, Otú ọ dị, taa, anyị ga-ekwu okwu banyere oku "MyTourBook".
N'ụzọ bụ isi "MyTourBook" Ọ bara uru onye njikwa ọzụzụ n'efu na n'efu nke na-enye ohere iji anya nke uche na nyochaa ụzọ ndị edepụtara site na ngwaọrụ GPS, igwe, ergometer na ụfọdụ egwuregwu kọmputa ndị ọzọ.
Ma ebe ọ bụ, banyere 4 afọ gara aga na a gara aga oge anyị bipụtara ozi banyere "MyTourBook", anyị ga-ahapụ njikọ ahụ ozugbo iji kwuo gara aga post Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịba uru nye ụfọdụ iji kwado ozi ma ọ bụ hụ mgbanwe na ọdịiche dị ka ọ dị taa:
"MyTourBook, sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nke na - enye gị ohere ibubata, wepu, dezie, ịlele na ụzọ mbupụ ụzọ eji ngwaọrụ GPS edere, ọ bụrụ ekwentị gị, ngwaọrụ maka ịgba ọsọ ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè, GPS ọdịnala, wdg. Ebumnuche bụ isi nke mmemme a bụ ijikwa mgbatị egwuregwu gị. A nwekwara ike iji ya dezie faịlụ ndị GPS nke ụgbọ ala gị mepụtara mana, ọ na-agbasosi ike iji nwee ike soro mgbatị ahụ, na-ahụ anya ma na-achịkọta nsonaazụ ya na eserese dị iche iche." MyTourBook, ezigbo njikwa njikwa
1 MyTourBook: Onye njikwa ọzụzụ egwuregwu n'efu
1.1 Gịnị bụ MyTourBook?
1.3 Ibudata, nwụnye, jiri na ihuenyo
MyTourBook: Onye njikwa ọzụzụ egwuregwu n'efu
Gịnị bụ MyTourBook?
Na ohere gara aga ahụ, nke anyị kwurula, "MyTourBook" M na-aga maka nọmba mbipute 9.05.1. Ọ na-aga ugbu a maka nọmba mbipute 21.6.1 (02/07/2021) ma kọwaa nkenke dị ka ndị a na ya gọọmentị webụsaịtị na SourceForge:
"MyTourBook bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nke na - enye gị ohere ịlele ma nyochaa ụzọ gasị edepụtara site na ngwaọrụ GPS, igwe, ergometer na ụfọdụ egwuregwu kọmputa ndị ọzọ."
Ruo taa, o nwere njirimara, arụmọrụ ma ọ bụ ikike ndị a:
Bubata, nata, bupu, dezie ma lelee njegharị.
Tinye ma gosipụta foto.
Tụlee njegharị na akpaghị aka.
Agba nke njem na akpaghị aka.
Mee nyocha onu ogugu nke data edere.
Jikwaa njegharị maka ndị dị iche iche
Ọzọkwa, ọ bụ n'efu, emeghe na n'efu. Ọ dabere na Eclipse (Java) ma nwee nkwado n'ọtụtụ asụsụ n'ọtụtụ asụsụ gụnyere Spanish ma ọ bụ multiplatform, ya bụ, ọ na-arụ ọrụ na nyiwe dị iche iche dịka: Linux, Windows na MacOS. Nke kachasị mma, ọ dị na mmepe zuru oke na mmepe zuru oke, yabụ ọ nwere ike ịme ọtụtụ ihe n'ọdịnihu site n'ịnọgide na-agbasawanye ikike ya.
Ibudata, nwụnye, jiri na ihuenyo
Maka ọmụmụ ihe anyị, anyị ga-ebudata ya na gị ukara download ngalaba nke na-ewe anyị ozugbo na ebe nchekwa ya SourceForge.
Ozugbo ebudatara na unzipped gị faịlụ isi mmalite dị ugbu a maka Linux (mytourbook-21.6.1-linux-64.zip) banyere anyị na mbụ Weghachite Linux akpọ Ọrụ ebube GNU / Linux , nke dabere na MX Linux 19 (Debian 10), ma wuo na-eso nke anyị «Na-eduga na Snapshot MX Linux», na nke na-eweta na ndabara Java 11 nke bụ nke kacha nta version dị mkpa iji na-arụ ọrụ, anyị dị nwere na-aga n'ime kere nchekwa akpọ "Mytourbook" ma na-agba ọsọ na executable faịlụ nwere otu aha, ma site na ọnụ ma ọ bụ graphically.
Mgbe ịmalite, "MyTourBook" na-egosi oge mbụ a obere Mbido nkuzi nke data onwe onye na nke mpaghara, nke mgbe emejuputara ya na-enye anyị ohere ịnweta isi ihuenyo ndị a:
Site na nke a gaba na, ọ na-anọgide na inyocha gị akwụkwọ, ngalaba ndị ọzọ na weebụsaịtị ya ma ọ bụ menu enyemaka ya na ngwa ahụ, ịmalite iji ngwa a kwuru ma ọ bụrụ na ọ bara uru maka ndị na-eme mmega ahụ ma ọ bụ usoro egwuregwu nke gụnyere njegharị.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ngwa akpọrọ «MyTourBook», nke na-adọrọ mmasị ma baa uru onye njikwa ọzụzụ n'efu na n'efu nke ahụ ga - enyere gị aka ilele ma nyochaa ụzọ ndị edepụtara site na ngwaọrụ GPS, igwe, ergometer ma ọ bụ ngwaọrụ egwuregwu kọmputa ọ bụla ọzọ; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » MyTourBook: Ntughari ohuru nke 21.6.1 nke Onye Nlekọta Ọzụzụ Egwuregwu
Ngwa dị ka nke a n'aka onye na-azụ ọzụzụ ọkachamara echere m na ọ ga-aba ezigbo uru. N'ihi na onye na-amu amu ojiji nkeonwe m na-ahụ obere uche, otu n'ime ebumnuche m na-ahụ mgbe niile mgbe m na-eme egwuregwu bụ ịmara onwe anyị, oke anyị, ọ ka bụ nke m, mana…. Ọ bụ na ụdị ngwa ahụ adịghị adọpụ uche na njedebe ahụ? Ana m ahụ ya dị ka onye na-aga ezumike ma na-echegbu onwe ya na ịse foto karịa ịnụ ụtọ oge ahụ.
Daalụ, Gregorio. Daalụ maka okwu gị na ee, ị dị mma. Nke ahụ bụ, ọ dị mma maka ndị nwere ọchịchị aka ha ma ọ bụ nke aka ha. N'ihi na, ọ bụrụ na a ga-eji ya maka naanị mmasi ma ọ bụ ihe ọchị, mgbe ahụ oge na ọ enjoyụ nke egwuregwu a lara n'iyi na nkọwa, eserese na ọnụọgụ ndị anyị na-agaghị eji ike ha niile rụọ.